ONLF iyo Itoobiya oo heshiis ku kala saxiixday caasimadda Asmara | Weheliye Online
ONLF iyo Itoobiya oo heshiis ku kala saxiixday caasimadda Asmara
Kaddib kulan ku dhaxmaray magaalada Asmara ee dalka Eretria mas’uuliyiin ka kala soctay Itoobiya iyo Ururka ONLF ayaa ugu danbeyntii lagu kala saxiixday heshiis ka koobnaa dhowr qodob.
Afhayeenka Ururka ONLF Cabduqaadir Hirmooge Cadaani ayaa sheegay in qodobada leysku afgartay uu ka mid ahaa qodob u ogolaanaya Jabhada ONLF in ay sii wada karaan halgankii iyo ujeedooyinkii ay u halgamaysay.
Qodobkan oo si gaar ah su’aal looga weydiiyay Cadaani ayaa sheegay in heshiisku dhigayo in ONLF si nabad-galyo ah u sii wadan karto halgankii ay markii horeba ugu jirtay xoreynta deegaannada Soomaali Galbeed, taasoo muujineysa in meesha laga saarayo in dagaal iyo colaad lagu raadiyo xornimada iyo halganka Jabhada muddo dheerba ku soo jirtay.
‘’Qodobada waxaa ka mid ahaa in la joojiyo colaada iyo in ONLF si buuxda u sii wadan karto si nabad galyo ah halgankii ay ku jirtay iyo la magacaabo guddiyo labada dhinac ah’’ ayuu yiri afhayeen Cadaani.
Dhinaca ONLF waxaa kulanka ku matalayay xubno uu horkacayay guddoomiyaha guud ee Ururka Admiral Maxamed Cumar Cismaan, halka dhinaca Itoobiya ay horkacayeen Wasiirka arrimaha dibedda, Wasiirka Maaliyada iyo waliba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida.
Ma’aha markii ugu horeysay oo Asmara ku kulmaan labada dhinac, hasse ahaatee heshiiska ay markan gaareen ayaa u muuqda mid soo gabagabeynaya wada hadallo waayadii ugu danbeeyayba u socday labada dhinac.
Previous articleMid ka mid ah Musharaxiinta ugu cadcad Koofur Galbeed oo gaaray Baydhabo
Next articleCiidamada Police ka oo Hooygeeda kala baxay Xildhibaanad ka tirsan Baarlamaanka.